Waa Hooyo, Hadana Khasab Cunug Kudhashay oo Go’aanka Qalbi-jab ah Qaadatay | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — December 24, 2019
Dowr isbuuc ka dib, Jovan ma aysan sii moogaan karin wiilkeeda yar. Waxay qaadatay go’aan ay dareensaneyd inuu horseedi karo inaysan dib ugu soo laabanin qoyskeeda. Waxay carruurteeda u shegetay inay dhakhtar u aadeyso magaalada Dohuk. Laakiin sida runta ah, waxay dib ugu laabaneysay xaruntii xannaanada agoonta.
Markii ay Jovan tagtay xaruntii agoonta, waxaa loo sheegay Aadan inuu xanuunsanaa, oo aysan arki karin. Laakiin Sakineh waxau ugu dambeyn qirtay – labo ama saddex maalmood ka dib – in xaruntii agoomda uu khilaaf ka dhacay islamarkaana uu garsoore xukumay in qaar ka mid ah caruurta loo bandhigo dad korsada. Sakineh waxay sheegtay in ay garsoorihii ku wargalisay in Aadan iyo 4 carruur ah oo kale aan la bixinin, maadaama laga yaabo inay hooyooyinkood dib u soo doontaan. Balse iyadoo ay taasi jirto, Aadan dad ayaa la siiyay.
Dhowr bilood ka dib, Khedr ayaa ogaaday meesha ay joogto, wuxuuna u diray farriin uu ugu sheegayay inaysan dib dambe u arki karin carruurteeda. Khedr wuu murugeysnaa laakiin ma uusan jixinjixeynin. Wuxuu sheegay in cunugga yar uusan dambi lahayn balse haddana aan dhinaca kale la aqbali karin cunug uu dhalay nin ka tirsan dadkii ehelkiisa laayay.
Jovan carruurteeda waaweyn way ku kala qeybsameen arrinta ku saabsan nolosha hooyadood. Wiilkeeda curadka ah ee Haitham wuxuu taageersan yahay fikirka aabihiis, wuxuuna diiday inuu walaal ahaan u aqbalo cunug uu dhalay nin xubin ka ahaa IS. Laakiin Xaawa, oo ah gabadhii dhabteeda ku hurdisiin jirtay Aadan markii ay Raqqa joogeen, aad bay u naxariis badan tahay wayna aqbashay. Jovan ma aha hooyada kaliya ee ay arrin noocaas ah ku dhacday. BBC-da ayaa la hadashay ilaa 20 haween oo kale oo reer Yaziidi ah, kuwaasoo carruur u dhalay dagaalyahannadii IS. Jovan hadda waxay sheegeysaa inay nolol adag ku jirto.
Laakiin cunuggaas aabihiis wuxuu ahaa ninka iyada afduubka u heystay, waxayna ugu dambeyn ku khasbanaatay inay faraheeda ka bixiso. Jovan markii hore waxay ku jirtay nolol aad u qurux badan, waxayna meel la dagganeyd seygeeda Khedr iyo carruurteeda. Waxay ku noolaayeen xaafad xasiloon oo ku taalla deegaannada ay waddanka Ciraaq ka daggan yihiin dadka kasoo jeeda qowmiyadda Yaziidi.
Waxay aad u jeclaan jirtay xilliyada xagaaga, markaasoo iyada iyo seygeeda ay bannaanka hore ee gurigooda isla tagi jireen marka ay carruurta ka seexdaan. Waxay si wada jir ah u sheekeysan jireen iyagoo daawanaya cirka nadiifta ah ee ay xiddiguhu ku sharraxan yihiin. “Aaad baan u faraxsanaa, waxaana ku noolaa nolosha ugu fiican ee qof u suurtagali karta”, ayey tiri Javan. Laakiin noloshii ceynkaas ahayd mar ayey isu baddashay si aan kasoo noqosho lahayn. Waxay markaas ahayd xagaagii 2014-kii.
Maalin ka mid ah bishii August ee sanadkaas, wakhtigii qadada ka dib, labo gaari oo uu ka dul babbanayay calan madow ayaa xaafaddooda soo gashay. Jovan iyo seygeeda Khedr ma aysan ka warqabin waxa xilligaas dhacayay laakiin way dareemayeen inay khatar soo food saartay. Way iska caddeyd in ragga la socday gawaaridaas ay ahaayeen dagaallameyaal ka tirsan kooxda IS.
Qoyskii Jovan waa la burburiyay, waxayna ka mid noqdeen 20 qoys oo halkaas laga kaxeystay. Ugu dambeyn waxaa la geeyay dooxada Sinjar ee ku taalla waqooyiga dalka Ciraaq. Arrinta aysan lamaanahan fahmin waxay ahayd in tallaabadaas ay qeyb ka ahayd weerar ay kooxda IS ku dooneysay inay kula wareegto dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Billowgii sanadkaas, kooxdu waxay la wareegtay magaalooyin u dhow caasimadda Baqdaad. Sidoo kale magaalada Mosul ayey qabsadeen shan bilood ka dib.
Jovan waxay durba ogaatay in goobta la geeyay ee magaalada Raqqa ku taalla ay ahayd suuq dadka lagu kala iibiyo. Iyada iyo carruurteeda waxaa la geeyay guri saddex dabaq ka kooban, oo sidoo kale ay ka buuxeen carruur iyo haween kale – oo gaarayay qiyaastii 1,500. Jovan waxay sheegtay inay taqaannay qaar badan oo ka mid ahaa haweenkii halkaas lagu hayay – oo qaarkood ay qaraabo ahaayeen kuwo kalena daris ahaayeen.
Wuxuu ahaa nin dhuuban, oo gar dheer leh. Jovan waxaa laga filayay inay diinta Islaamka qaadato islamarkaana uu ninkaas “guursado”. Maalmo ayey oyneysay. Saddex jeer ayey isku dayday inay baxsato, balse way ku guul darreysatay. Laakiin mar walba carruurteeda dartood ayey u baxsan weyneysay.
Haitham, oo ahaa wiilka ugu weyn wuxuu jiray 13 sano, laakiin Azad oo ugu yaraa wuxuu jiray 3 sano kaliya. Mar kasta oo la qabto iyadoo baxsaneysa, Abu Muhajir ayaa qol ku xiri jiray.
Ugu dambeyntii Jovan waxay ogaatay inaysan waddo kale u furneyn, waxayna khasab ku qaadatay diinta Islaamka. Ilaa iyo hadda haweeneydan waxay ka argagaxdaa sheekada ku saabsan ninkii afduubka u heystay. Laakiin waxay sheegtay in uu mar walba u oggolaan jiray inay carruurteeda la joogto, uuna u ballan qaaday inuu si wanaagsan u xannaaneyn doono dhammaantood. Qaar badan oo ka mid ahaa carruurtii Yaziidiyiinta waa laga kaxeeyay hooyooyinkood – wiilasha waxaa loo qaaday xeryaha tababarka ciidamada, gabadhahana waxaa laga iibiyay rag u galmoonayay kuwo kalena waxaa loo qaatay shaqaalaha guryaha.
Shan bilood ka dib Jovan waxay ogaatay inay uur leedahay. Isbahaysiga uu Mareykanku hoggaaminayay ayaa duqeymo joogto ah ku hayay magaalada Raqqa. Sidoo kale, ciidamada dowladda Ciraaq iyo dagaalyahannada Kurdiyiinta ayaa weerarro culus ku hayay xoogagga IS. Ninka afduubka u heystay Jovan wuxuu aad ugu mashquulay dagaalladaas, wuxuuna doonayay inuu haweeneydan iyo carruurteeda iska sii iibiyo. Laakiin markii uu ogaaday inay uur u leedahay wuu baddalay go’aankiisa. 7 bilood oo uur ah markii ay lahayd, Jovan waxaa loo soo sheegay in Abu Muhajir lagu dilay dagaal. Xilligaas wixii ka dambeeyayna, cunugga mas’uuliyaddiisa waxay saarnayd iyada kaligeed.
Xaawa iyo Haitham ayaa hooyadood ka caawiyay inay umusho. Jovan waxay sheegtay in iyada iyo carruurteedaba ay aad u jeclaadeen cunugga kusoo biiray, inkastoo uu muuqaal ahaan aad uga duwanaa carruurta kale. Duqeymaha joogtada ah ee magaalada ku socday waxay Jovan iyo carruurteeda ku khasbayeen inay marba guri ka guuraan. Waxaa aad ugu adkaan jirtay inay cunto helaan, marar badanna way baahnaan jirtay si ay carruurteeda wa u siiso.
Dhibaato kasta oo soo wajahda waxay ugu dulqaadaneysay Aaadan dartiid, waayo aad bay u jecleyd. “Wuxuu ii ahaa qof aanan ka maarmi karin. Waan ogaa inuusan seygeyga runta ah dhalin, oo aabihiisna uu ahaa dilaa, laakiin wuxuu ahaa dhiiggeysa, jirkeyga ayuuna kasoo go’ay”, ayey tiri.
Haitham, Xaawa iyo Azad waxay dib ula midoobeen aabahood. Laakiin Jovan waxay Raqqa sii joogtay muddo 2 sano ah oo kale. Ma aysan hubin in Khedr uu aqbali doono wiilkeeda Aadan. Khedr wuxuu in muddo ah ka fikirayay wixii uu sameyn lahaa. Qowmiyadda Yaziidiga waxaa u yaalla sharci adag oo dhigayay in qofkii diintooda ka baxa uusan dib dambe ugu soo laaban karin. Laakiin wadaadda qowmiyaddaas ayaa markii dmabe sharcigaas qafiifiyay, waxayna fursad siiyeen haweenkii la afduubtay ee diintooda ka baxay inay kusoo noqon karaan. Laakiin dhibaatada kale ee jirtay waxay ahayd in cunugga ku biiri kara Yaziidiyiinta uu ahaa mid ay labadiisa waalidba kasoo jeedaan reer Yaziiddi, kaasina uu ahaa sharci adag diintooda qeyb ka ah.
Jovan waxay markaas la nooleyd haween kale oo ay ka dhinteen raggii IS. Dhammaan dumarkaas waxay ka cabsanayeen inay dib ugu laabtaan xaafadahoodii dooxada Sinjar, ceebtaas awgeed. Qaarkood waxay heysteen carruur dhowr ah oo ay u kala dhaleen dhowr nin oo IS ka tirsanaa. Khedr, wuxuu ugu dambeyn go’aansaday inuu carruurtiisa hooyadood dib ugu soo celiyo, wuxuuna Jovan u sheegay in Adam uu soo dhaweynayo.
Islamarkiiba Jovan waxay ku laabatay Sinjar, iyadoo wadata wiilkeeda. Laakiin dhowr maalmood ka dib xaaladdu way isbaddashay. Jovan waxay sheegtay in dhammaan qoyskeedu ay billaabeen inay kula taliyeen sidii ay cunuggaas isaga dhiibi lahayd. “Waxay ii sheegayeen sida ay muhiim u tahay inaan diinteenna ilaalinno, iyo sida aysan bulshadeennu marna u aqbali doonin cunug uu dhalay nin muslim ah oo waliba ka tirsanaa dagaalyahannada IS”.
Diiinta Yaziidiyiinta: Sanadkii cusbaa ee Yaziidiyiinta, waxay markii ugu horreysay 4 sano ka dib qoyskeeda kala qeyb qaadatay dabaaldagyada, waxayna suuqa u aadday inay soo iibsato midabbo kala duwan oo dhaqanka Yaziidiyiinta uu dhigqayo in ukumo la mariyo.
Jovan aad ayey u oysay markii warkaas loo sheegay. Ma aysan awoodin inay dib ugu laabato gurigeeda, taas baddalkeedana waxay aadday xero qaxooti oo lagu xareeyo dumarka, oo ku taalla waqooyiga Ciraaq. Dhowr bilood ka dib, Khedr ayaa ogaaday meesha ay joogto, wuxuuna u diray farriin uu ugu sheegayay inaysan dib dambe u arki karin carruurteeda.
Khedr wuu murugeysnaa laakiin ma uusan jixinjixeynin. Wuxuu sheegay in cunugga yar uusan dambi lahayn balse haddana aan dhinaca kale la aqbali karin cunug uu dhalay nin ka tirsan dadkii ehelkiisa laayay. Jovan carruurteeda waaweyn way ku kala qeybsameen arrinta ku saabsan nolosha hooyadood. Wiilkeeda curadka ah ee Haitham wuxuu taageersan yahay fikirka aabihiis, wuxuuna diiday inuu walaal ahaan u aqbalo cunug uu dhalay nin xubin ka ahaa IS.
Laakiin Xaawa, oo ah gabadhii dhabteeda ku hurdisiin jirtay Aadan markii ay Raqqa joogeen, aad bay u naxariis badan tahay wayna aqbashay. Jovan ma aha hooyada kaliya ee ay arrin noocaas ah ku dhacday. BBC-da ayaa la hadashay ilaa 20 haween oo kale oo reer Yaziidi ah, kuwaasoo carruur u dhalay dagaalyahannadii IS. Jovan hadda waxay sheegeysaa inay nolol adag ku jirto.
Sida ay sheegtay Sakineh, Jovan waxay awood u leedahay inay Aadan kasoo ceshato dadka loo siiyay inay korsadaan, maadaama ay tijaabada DNA-da ku caddeyn karto inay hooyadiis tahay. Rajada kaliya ee ay qabto waa in maalin uun ay iyada iyo carruurteeda dib u midoobi doonaan.
“Waxaan ku rajo weynahay in maalin uun Ilaahay uu ii naxariisan doono, ka dibna aan is arki doonno ilameyga”, ayey tiri.
Tags: Hadana Khasab Cunug Kudhashay oo Go'aanka Qalbi-jab ah QaadatayWaa Hooyo
Next post Sidee Ula Dhaqantaa Dariskaaga?
Previous post Cilmiga Falsafada Siyaasada “Political philosophy”